US: Donald Trump oo olole doorasho ku qabsaday Oklahoma iyo tiro yar oo shacab ah oo usoo xaadiray - Calanka TV
US: Donald Trump oo olole doorasho ku qabsaday Oklahoma iyo tiro yar oo shacab ah oo usoo xaadiray
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qabsaday ololahiisa doorashada ee uu horreeyey tani iyo marka uu dalka mareykanka ka dhaqan galay xayiraadaha ka dhashay coronavirus, dadka ololaha ka qayb galay oo aad uga yaraa inti la filayey iney ka soo qayb galaan.
Mr Trump ololahiisa doorashada uu ku qabanayey Tulsa, ee gobolka Okolohama waxaa horraanti toddobaadkan tikidhada goostay dad ka badan malyan si ay uga soo qayb galaaan isu soo baxaasi olalaha doorashada.
Balse goobta oloaha doorashada Trump inuu ku qabsado loo diyaariyey oo qaaddo 19,000 oo qof ayaa u muuqatay mid inteeda badan madhan.
Iyada oo tirada dadka aadka u yar ee ka soo qayb galay loo sababeeyey xaaladda cudurka safmarka, iyada oo dadka qaarna ay walaac ka muujiyeen xilli uu cudurku taagan yahay in dad badan hal goob la isugu keeno.
Dadka ka soo qayb galay ololaha Trump ayaa la filayey iney saxeexaan nidaam ay kaga hortagayaan faafitaanka cudurka. Saacada ka hor inta uu iisu imaatinka ololaha doorashada qabsoomin lix ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya ololaha Trump oo la baaray in Covid-19 laga helay.